Warbaahinta Somaliska oo bilaabeysa tabinta Wararka La xiriira Qaxootiga Caalamka ee Somalida.. Somali - Wararka Somalida, Caalamka
HomeWararka Maanta SomaliskaWarbaahinta Somaliska oo bilaabeysa tabinta Wararka La xiriira Qaxootiga Caalamka ee Somalida..
Warbaahinta Somaliska oo bilaabeysa tabinta Wararka La xiriira Qaxootiga Caalamka ee Somalida..
April 5, 2018 Wararka Maanta Somaliska, Warka ugu akhriska badan 0
inkastoo aas aaska warbaahinta Somaliska uu la xiriiro Wararka la xiriira Sweden, Norway Denmarka iyo Finland hadana waxaa dhawaan bilaabidoonaa tabinta wararka la xiriira Qaxootiga Caalamka inagoo diiradad saaridoono wadamada ugu badan ee somalida ku noolyihiin iyo goobaha laga soo qaado qaxootiga.
Arimaha muhiimada saaridoono waxaa kamid ah.
Dhanka sharciyada ku soo kordhay wadankaasi.
Heerka Somalida iyo kaalinta ay kaga jiraan wadanka.
Wadankaasi iyo Meelaha uu kasoo qaado Qaxootiga Somalida.
Sharuudaha lagu tagi karo Wadankaasi sida , Waalidka, Xaaskaasga, Caruurtaada ama Qaraabadaada,
Tabinta Wararka Qaxootiga ee Caalamka ayaa timid kadib markii ay nasoo gaareen Codsiyo ku aadan xaalada Qaxootiga wadamada qaar iyo halka ay marayaan xiligan waxaa kaloo codsiyada ku jira wadamada africa ee markaasi laga soo qaado qaxootiga.
Wararka Qaxootiga ee Caalamka ayaana ugu tala galnay in aan baahino maalmaha Sabtiga iyo Axada si dadka ay u helaan jadwal ku aadan wararkaasi iyadoo kuwa deg dega ah aan tabindoono maalin kasta.
Fadlan Sidee u Aragtaa Balaarinta Shaqadeena Cusub